C45 Miniature Circuit Breaker Abakhiqizi & Abahlinzeki - China C45 Miniature Circuit Breaker Factory
I-C45 4P Miniature Circuit Breaker
I-C45 yesicelo isebenza kulayini we-AC 50Hz / 60Hz, 230V esigxotsheni esisodwa, i-400V iphindwe kabili, emithathu, izingongolo ezine zokuvikela ukulayishwa ngokweqile nesekethe elifushane, futhi kukalwe njengamanje okufika ku-63A. Ingasetshenziswa futhi ekuguqulweni kolayini okungajwayelekile ngaphansi kwesimo esijwayelekile.I-breaker isebenza ngohlelo lokusabalalisa ukukhanyiselwa ebhizinisini lezimboni, esifundeni sezentengiselwano, esakhiweni esiphakeme nasendlini yokuhlala. Ihambisana namazinga we-IEC60898. Main Technical Ipharamitha Uhlobo C45 Pole 1 ...
I-C45 3P Miniature Circuit Breaker
I-C45 yesicelo isebenza kulayini we-AC 50Hz / 60Hz, 230V esigxotsheni esisodwa, i-400V iphindwe kabili, emithathu, izingongolo ezine zokuvikela ukulayishwa ngokweqile nesekethe elifushane, futhi kukalwe njengamanje okufika ku-63A. Ingasetshenziswa futhi ekuguqulweni kolayini okungajwayelekile ngaphansi kwesimo esijwayelekile.I-breaker isebenza ngohlelo lokusabalalisa ukukhanyiselwa ebhizinisini lezimboni, esifundeni sezentengiselwano, esakhiweni esiphakeme nasendlini yokuhlala. Ihambisana namazinga we-IEC60898. Main Technical Ipharamitha Uhlobo C45 Pole 1P ...
I-C45 2P Miniature Circuit Breaker
I-C45 yesicelo isebenza kulayini we-AC 50Hz / 60Hz, 230V esigxotsheni esisodwa, i-400V iphindwe kabili, emithathu, izingongolo ezine zokuvikela ukulayishwa ngokweqile nesekethe elifushane, futhi kukalwe njengamanje okufika ku-63A. Ingasetshenziswa futhi ekuguqulweni kolayini okungajwayelekile ngaphansi kwesimo esijwayelekile.I-breaker isebenza ngohlelo lokusabalalisa ukukhanyiselwa ebhizinisini lezimboni, esifundeni sezentengiselwano, esakhiweni esiphakeme nasendlini yokuhlala. Ihambisana namazinga we-IEC60898. Main Technical Ipharamitha Uhlobo C45 Pole 1P 2P ...
I-C45 1P Miniature Circuit Breaker